Mamwe mashoko nezvechibayiro chemhosva (1-7)
Zvinoitwa pakupa mipiro (8-30)
Chibayiro chinopiswa (8-13)
Mupiro wezviyo (14-23)
Chibayiro chechivi (24-30)
6 Jehovha akaenderera mberi achiti kuna Mozisi: 2 “Kana munhu akatadza uye akaita zvinhu zvekusatendeka kuna Jehovha+ nekunyengera muvakidzani wake pamusoro pechinhu chaakachengeteswa,+ kana kuti chaakabatiswa, kana kuti akabira kana kubiridzira muvakidzani wake, 3 kana kuti akawana chinhu chakarasika, oreva nhema pamusoro pacho, uye kana akapika zvenhema pamusoro pechivi chipi zvacho chaangaita,+ izvi ndizvo zvaanofanira kuita: 4 Kana aine chivi chaakaita uye akabatwa kuti ane mhosva, anofanira kudzorera chinhu chaakaba, chinhu chaakatorera munhu, chaakabiridzira, chinhu chaakachengeteswa, kana kuti chinhu chakarasika chaakawana, 5 kana kuti chero chinhu chaakapika zvenhema nezvacho, anofanira kuchiripa zvakakwana,+ uye achawedzera chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu zveukoshi hwacho. Achapa muridzi wacho pazuva raanobatwa kuti ane mhosva. 6 Uye achatora pamakwai ake gondohwe rakanaka rinoenderana nemutengo wakatarwa sechibayiro chake chemhosva, ouya naro kumupristi kuti ape kuna Jehovha kuti rive chibayiro chemhosva.+ 7 Mupristi achamuyananisira pamberi paJehovha, uye achakanganwirwa chero chaangava akaita, chakaita kuti ave nemhosva.”+ 8 Jehovha akaenderera mberi achiti kuna Mozisi: 9 “Rayira Aroni nevanakomana vake, uchiti, ‘Uyu ndiwo mutemo wechibayiro chinopiswa:+ Chibayiro chinopiswa chicharamba chichitsva pamoto unenge uri paatari usiku hwese kusvikira mangwanani, uye moto unenge uri paatari unofanira kuramba uchibvira. 10 Mupristi anofanira kupfeka nguo yake yebasa yejira,+ uye ngaapfeke chikabudura* chejira+ pamuviri wake. Kana adaro achabvisa madota*+ echibayiro chinopiswa chakatsva nemoto pamusoro peatari, oaisa parutivi peatari yacho. 11 Anofanira kubvisa nguo dzake,+ opfeka dzimwe nguo, oendesa madota acho kunzvimbo yakachena iri kunze kwemusasa.+ 12 Moto unofanira kuramba uchibvira paatari. Haufaniri kudzima. Mupristi anofanira kuisa huni+ ipapo mangwanani ega ega, oronga chibayiro chinopiswa pamusoro padzo, uye achaita kuti mafuta ezvibayiro zverugare apfungaire pamoto.+ 13 Moto unofanira kugara uchibvira paatari. Haufaniri kudzima. 14 “‘Uyu ndiwo mutemo wemupiro wezviyo:*+ Imi vanakomana vaAroni munofanira kuuya nawo kuna Jehovha pamberi peatari. 15 Mumwe wavo anofanira kunokora furawa yakatsetseka yemupiro wezviyo nemamwe emafuta acho nezvinonhuhwirira zvichena zvese zviri pamusoro pemupiro wezviyo, uye anofanira kuita kuti zvipfungaire pamusoro peatari zvichinhuhwirira zvakanaka* zvichimiririra mupiro wabviswa* kuna Jehovha.+ 16 Aroni nevanakomana vake vachadya zvinenge zvasara pamupiro uyu wezviyo.+ Ngazvidyiwe zviri chingwa chisina mbiriso munzvimbo tsvene. Vachazvidyira muchivanze chetende rekusanganira.+ 17 Hazvifaniri kubikwa pamwe chete nechinhu chero chipi zvacho chine mbiriso.+ Ndakazvipa kuti zvive mugove wavo unobva pamipiro yangu inopiswa nemoto.+ Icho chinhu chitsvenetsvene,+ sezvakaita mupiro wechivi uye sezvakaita mupiro wemhosva. 18 Vanhurume vese pavana vaAroni vachazvidya.+ Iwo mugove wavo unobva pamipiro inopisirwa Jehovha nemoto uchagara uripo muzvizvarwa zvenyu zvese.+ Chinhu chese chinozvigunzva chichava chitsvene.’” 19 Jehovha akataurazve naMozisi achiti: 20 “Uyu ndiwo mupiro uchauya naAroni nevanakomana vake kuna Jehovha pazuva raanozodzwa:+ chegumi cheefa*+ yefurawa yakatsetseka kuti uve mupiro wezviyo,+ hafu yawo ichipiwa mangwanani uye imwe yacho manheru, uye izvi ndizvo zvichagara zvichiitwa. 21 Ngaubikirwe mugango+ nemafuta. Uuye nawo wakanyatsosanganiswa nemafuta, womedura-medura mupiro iwoyo wezviyo unenge wabikwa sechingwa woupa kuti unhuhwirire zvakanaka* kuna Jehovha. 22 Uchapiwa nemupristi akazodzwa achamutsiva achibva pavanakomana vake.+ Murau uyu uchagara uripo: Mupiro unopiswa wese uchaitwa kuti upfungaire kuna Jehovha. 23 Mupiro wese wezviyo unopiwa nemupristi unofanira kupiswa wese. Haufaniri kudyiwa.” 24 Jehovha akataurazve naMozisi achiti: 25 “Udza Aroni nevanakomana vake kuti, ‘Uyu ndiwo mutemo wechibayiro chechivi:+ Panogara pachiurayirwa chibayiro chinopiswa+ ndipo panourayirwawo chibayiro chechivi pamberi paJehovha. Icho chinhu chitsvenetsvene. 26 Mupristi anochipa kana paitwa chivi ngaachidye.+ Chichadyirwa munzvimbo tsvene, muchivanze chetende rekusanganira.+ 27 “‘Chese chinogunzva nyama yacho chichava chitsvene, uye kana munhu akadonhedzera ropa racho panguo yake, unofanira kuigezera munzvimbo tsvene. 28 Hari yachakabikirwa inofanira kuputswa. Asi kana chakabikirwa mumudziyo wemhangura, ngaubve wakweshwa, wosukwa nemvura. 29 “‘Vanhurume vese vanoshanda sevapristi vachachidya.+ Icho chinhu chitsvenetsvene.+ 30 Asi hapana chibayiro chechivi chinofanira kudyiwa kana rimwe ropa racho rapinzwa mutende rekusanganira kuzoyananisira munzvimbo tsvene.+ Chinofanira kupiswa nemoto.